Ulwabiwo olusekwe kubuntu- Ubunlog | Ubunlog (Iphepha 2)
Pop! _OS 21.04 ifika neCOSMIC, uphuculo kunye nokunye
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo iSystem76 ibhengeze ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yosasazo lweLinux "iPop! _OS 21.04", apho isiqalelo
IJingOS 0.9 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo
Ekuqaleni konyaka sabelane apha kwibhlog malunga neJingOS esasazwa ngeLinux esekwe ku-Ubuntu ...
IBodhi Linux 6.0 sele ikhutshiwe kwaye ezi zezona nguqulelo zibalulekileyo
Ukuqaliswa kwenguqulelo entsha yeBodhi Linux 6.0 kusandula kwenziwa, eyakhelwe kwisiseko se-Ubuntu 20.04.2 LTS ...
Iincasa ze-Ubuntu 18.04 ziye zafikelela esiphelweni seminyaka emithathu yobomi. Ixesha lokuhlaziya kuhlobo olukhutshwe ngo-Epreli 2020.
Ubuntu Cinnamon 21.04 ngoku ifumaneka ngeCinnamon 4.8.6 kunye neLinux 5.11
Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo ngowokugqibela kwiincasa ezisemthethweni okanye ezijolise ekufikeni, kwaye yenza njalo ngeCinnamon 4.8.6.
UbuntuDDE 21.04 isungula iVenkile ye-DDE kwaye yongeza ukulungiswa kwayo yonke into
UbuntuDDE 21.04 IHirsute Hippo ifike ngemini kamva kuneencasa ezisemthethweni, kwaye ikwenzile oko ngehabhu entsha yesoftware.
ILubuntu 21.04 ngoku iyafumaneka nge-LXQt 0.16.0 kunye ne-QT 5.15.2
ILubuntu 21.04 Hirsute Hippo ize notshintsho oluncinci, uninzi lwazo lunxulumene neLinux 5.11 okanye i-LXQt 0.16.0 desktop.
Ubuntu MATE 21.04 imihlaba ene-MATE 1.24, Yaru MATE kunye nezinye iindaba
Ubuntu MATE 21.04 ufikile nohlobo olutsha lwendawo yemizobo kunye nomxholo obolekwe ku-Ubuntu abawubiza ngokuba yiYaru MATE.
Ubuntu Budgie 21.04 ikhutshwe ngomxholo omtsha, uphuculo lwayo yonke into kunye nohlobo lweRaspberry Pi
Ubuntu Budgie 21.04 Hirsute Hippo sele ikhutshiwe kwaye iza neendaba ezinje ngenguqulelo ye-ARM yeRaspberry Pi 4 phantsi kwengalo.
Ubuntu Studio 21.04 ifika ngePlasma 5.21 kunye neenguqulelo ezintsha zezicelo zayo zemultimedia
Ubuntu Studio 21.04 Hirsute Hippo ifikile ngePlasma 5.21 efanayo neKubuntu kunye neenguqulelo ezintsha zezicelo zayo zemultimedia.
IXubuntu 21.04 Hirsute Hippo ize nezinto ezintsha ezinje ngemeko yemizobo yeXFCE 4.16 okanye ukhetho lofakelo "oluncinci".
I-Xubuntu 21.04 isibonisa ukuba iphepha lakho liya kuba njani
I-Xubuntu 21.04 Hirsute Hippo ityhile ukuba iya kuba yintoni iphepha lodonga abaza kulusebenzisa ukusukela nge-22 ka-Epreli, kwaye ewe, lincinci.
Uhlaziyo lwe KDE neon ngaphandle kweintanethi lufikelela kubo bonke abasebenzisi
I-neon ye KDE isandula ukukhupha inoveli enomdla kakhulu: uhlaziyo lwenkqubo ngaphandle kweintanethi ukunqanda ukuyeka.
I-Linux Mint iya kusebenza ekuphuculeni umphathi wokufaka uhlaziyo
Abaphuhlisi beLinux Mint kutshanje babhengeze ukuba bazimisele ukuphinda basebenzise umphathi wokufaka ...
ICorellium ikwazile ukuhambisa Ubuntu kwi-M1
Iikhompyuter zeMac ezisebenza kwiiprosesa ze-M1 (ezinje ngenqanaba lokungena iMacBook Pro, iMac mini, kunye neMacBook Air) ngoku zinokuqalisa
INitrux 1.3.7 iza neLinux 5.10.10, KDE Plasma 5.20.5, izincedisi kunye nokunye
Ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yosasazo lweLinux "iNitrux 1.3.7" ipapashiwe eyakhiwe ngesiseko ...
Ubuntu Core 20, i-Canonical's distro yezixhobo ze-IoT, sele ikhutshiwe
I-Canonical kutshanje ityhile ukukhutshwa kwe-Ubuntu Core 20, ukuhanjiswa kwe-Ubuntu okulungiselelwe ...
I-JingOS, usasazo olusekwe ku-Ubuntu kwaye lukhuthazwe yi-iPadOS
Ukwaziswa kolwabiwo olutsha lwe-Linux esekwe kubuntu, ebizwa ngokuba yiJingOS, kutshanje kutyhilwe kunye nabaphuhlisi ...
ILubuntu 21.04 Hirsute Hippo ivula ukhuphiswano lwayo lodonga
ILubuntu 21.04 Hirsute Hippo ivule ukhuphiswano lwayo lodonga oluza kuvulwa ukusukela namhlanje kude kube sekupheleni kukaFebruwari.
Kungekudala siya kuba nakho ukufaka ii-OS zokuqala kwiRaspberry Pi
i-OS yokuqala ibhengeze kwibhlog yayo ukuba iyasebenza ukukhupha umfanekiso we-ARM oya kuthi usebenze kwibhodi yeRaspberry Pi 4 4GB.
Ubuntu Web ithathele ingqalelo ukutshintsha isikhangeli apho izakusekwa khona, kodwa iya kuqhubeka ngeFirefox
Ubuntu Web, ejolise ekubeni ibe yenye indlela yasimahla kwiChannel OS, ethathela ingqalelo ukutshintsha isikhangeli esisekwe kuyo, kodwa iya kuqhubeka ngeFirefox.
UbuntuDDE: yabo bafuna ukungena, kuphela kwento ebambe umdla wam
UbuntuDDE Remix yinkqubo yokusebenza efuna ukuba yincasa esemthethweni. Ukuba iyaphumelela, iCanonical iya kongeza inkqubo entle kakhulu.
Kwaye kwiintsuku ezine kamva, iXubuntu 20.10 yenza ukwazisa ngokusesikweni, ngeXfce 4.16
I-Xubuntu 20.10 Groovy Gorilla ikhutshiwe ngokusesikweni, kwaye kwiintsuku ezine kamva kuxa bepapashe ukufumaneka kwayo.
Pop! _OS 20.10 ifika kunye nokuphuculwa kwemo engqongileyo, inkxaso yemizobo ehlanganisiweyo kunye nokunye
Abaphuhlisi beNkqubo76 kutshanje babhengeze ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yosasazo lwabo lweLinux "Pop! _OS 20.10.
ILubuntu 20.10 Groovy Gorilla ize notshintsho oluncinci, kodwa ibalulekile ukusuka kwindawo yokuthembeka.
I-Kubuntu 20.10 Groovy Gorilla ilapha, kwaye iyakusivumela ukuba sisebenzise iPlasma 5.19.5 nje emva kokufakwa kwayo kunye nezinye iindaba.
Inguqulelo entsha yePuppy Linux 9.5 "FossaPup" sele ikhutshiwe
Inguqulelo entsha yePuppy Linux 9.5 enegama lekhowudi "FossaPup" sele ikhutshiwe kwaye kule nguqulelo intsha yotshintsho ...
I-Zorin OS 15.3 ifika isekwe kwi-Ubuntu 18.04.5, Linux 5.4 nangaphezulu
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kukhutshwe inguqulelo entsha yeZorin OS 15.3 yaziswa, eza isekwe kwi-Ubuntu 18.04.5 kunye nezixhobo ...
Inguqulelo entsha ye-Ubuntu OEM Pack 20.04 sele ikhutshiwe
Ukuqaliswa kwenguqulelo entsha ye-Ubuntu OEM Pack 20.04 kusandula ukwaziswa kwaye ukudityaniswa ...
I-KDE neon ekugqibeleni yenza ukutsiba kwiBionic Beaver kwaye isekwe kwi-Ubuntu 20.04
I-KDE neon ekugqibeleni isekwe kwi-Ubuntu 20.04 Focal Fossa, itsiba abayenzileyo ukusukela oko iBionic Beaver yasungula ngaphezulu kweminyaka emibini eyadlulayo, ngo-Epreli 2018.
Isiseko se-OS 5.1.7 sifika notshintsho kunye nokubhengeza uguqulelo 6
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo inguqulelo entsha yohlaziyo lwe-Elementary OS 5.1.7 yakhutshwa, inguqu apho kwenziwe khona utshintsho ...
REMnux ukuhanjiswa kugxile kuhlalutyo lwe-malware olusekwe kwi-Ubuntu
Olu hambiso lwenzelwe ukufunda kunye nokubuyisela umva ikhowudi yeenkqubo ezinobungozi. Kwinkqubo yohlalutyo, i-REMnux ...
Ubuntu Web: iprojekthi entsha iya kudibanisa Ubuntu kunye neFirefox ukuma kwiChannel OS
Ubuntu Web yiprojekthi esele izelwe kwaye ithembisa ukuba yindawo yasimahla nevulekileyo kwiGoogle Chrome OS.
UbuntuEd lulwabiwo olujolise kwimfundo esele izelwe. Yinto yendalo endaweni ye-Edubuntu engasasebenziyo ngoku.
Ukulibaziseka kweLinux Mint Mint-Y umbala wephalethi kwaye upapashe isikhokelo somsebenzisi esitsha esichaza izinto ezimbalwa
I-Linux Mint 20 ifika ngokususa inkxaso kwi-Snaps, ke iqela lakhe lipapashe ezinye izikhokelo kwincwadana yabo yenyanga kaJuni.
I-Linux Mint 20 Ulyana Ikhutshwe ngokusesikweni kwiCinnamon, XFCE, kunye neMATE
UClement Lefebvre wenze ngokusesikweni ukukhutshwa kweLinux Mint 20 Ulyana, esekwe kwi-Ubuntu 20.04 kwaye ngaphandle kwenkxaso yeephakeji ze-Snap.
Sichaza indlela yokuvuselela inkxaso kwiiphakheji ze-Snap kwiLinux Mint 20, uguqulelo oluchaze imfazwe kolu hlobo lwepakeji.
Ngoku unokukhuphela i-beta yokuqala yeLinux Mint 20, uguqulelo oluya kubaluleka kuba lolokuqala ukwala iiphakheji zeCanonical's Snap.
Isiseko se-OS 5.1.5 silapha kwaye siza nokuphuculwa kweAppCenter, inethiwekhi, umphathi wefayile kunye nokunye
Inguqulelo entsha yosasazo oludumileyo lweLinux "Elementary OS 5.1.5" ivele nje, apho kuphuculwe ukuphuculwa ...
I-Linux Mint 20 iya kuphucula ukuzikhusela kwakho kwi-Snaps, into uluntu olukhalaze ngayo
Kwinqaku elitsha lolwazi malunga nophuhliso lweLinux Mint 20, uClement Lefebvre uqinisekisa ukuba uyakuphucula inkxaso yeephakeji zeSnap.
I-BackBox Linux 7 ilapha kwaye iza isekwe kwi-Ubuntu 20.04 LTS
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukumiliselwa kwenguqulo entsha ye-BackBox Linux 7 yahanjiswa, apho kukhankanywa ukuba ifika ngenani elikhulu le ...
I-Zentyal, i-distro esemagqabini yokwenza iiseva zasekhaya
Ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yosasazo lweLinux "iZentyal 6.2" sele ibhengeziwe kwaye iyaqhubeka nokwakhiwa ngokusekwe ...
Entsha? I-flavour: Ubuntu Unity Remix 20.04 ikhupha ingxelo yayo yokuqala ezinzileyo
Ngoku iyafumaneka Ubuntu Unity Remix 20.04, inguqulelo yokuqala ezinzileyo yale flavour intsha isebenzisa imeko yemizobo elahliweyo yiCanonical.
I-Xubuntu ifuna ukuvuselela inxenye yomfanekiso wayo kwaye icele uncedo lwakho ukuba uyakwazi ukuyila
UXubuntu uthathe isigqibo sokuhlaziya imouse kwi logo yayo. Ukuba uyazi uyilo, iqela lakhe licela uncedo lwakho ukuphucula inxenye yomfanekiso wakhe.
Akukho nto ingako ithethwayo malunga noku: Ngaba i-KDE iyekile kwi-KMail yayo? I-Kubuntu 20.04 ihambela kwiThunderbird
I-KDE igqibe kwelokuba isuse i-KMail kwi-Kubuntu 20.04 yesoftware kwaye yazise iThunderbird. Yintoni ebangela le ntshukumo?
UbuntuDDE 20.04, uguqulelo lokuqala oluzinzileyo lwe-Ubuntu flavour kunye nendawo ye-Deepin
Ngoku iyafumaneka UbuntuDDE 20.04, inguqulelo yokuqala ezinzileyo yeyokuba iya kuba yintoni incasa yeshumi Ubuntu kwaye isebenzisa i-Deepin njengendawo yemizobo.
Pop! _OS 20.04 sele ikhutshiwe, yazi iindaba zayo kwaye
Abaphuhlisi beNkqubo76 babhengeze ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yosasazo lwabo lweLinux “Pop! _OS 20.04 ”, ephuhliswayo ...
Ubuntu Studio 20.04 ngoku iyafumaneka, inendawo yemizobo efana neXubuntu 20.04 kunye nezi ndaba
Emva kwexesha lokungaqiniseki, sele sinenguqulo entsha ye-Ubuntu Studio: Ubuntu Studio 20.04 LTS Focal Fossa ifika nezi ndaba.
Ubuntu Cinnamon 20.04 ifika isenza umsebenzi wasekhaya ukubonisa ubungqina bayo obunzulu ukuze ibe yincasa esemthethweni
Ubuntu Cinnamon 20.04 luguqulelo lokuqala lolu hambo lokufika ngomhla ochanekileyo. Ibandakanya zonke ezi ndaba.
I-Xubuntu 20.04 ngoku iyafumaneka, ngomxholo omtsha omnyama, iXfce 4.14 kunye nezinye izinto ezintsha
I-Xubuntu 20.04 LTS Focal Fossa ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa, ukufakwa okanye ukuhlaziywa. Kule nqaku sikuxelela konke malunga nokuqaliswa.
ILubuntu 20.04 LTS Focal Fossa ngoku iyafumaneka, kunye neLXQt 0.14.1 kunye nezinye izinto ezintsha
ILubuntu 20.04 ifikile njengenguqulelo yeLTS yakutshanje eneendaba ezibalaseleyo ezinje ngale sizichazayo kweli nqaku.
Ubuntu Budgie 20.04 LTS sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo
Ukuqhubeka ngokukhutshwa kweencasa ze-Ubuntu 20.04 LTS, ngoku lixesha lokuba uthethe malunga nomntu ofumene ukuthandwa ...
Ngoku iyafumaneka ukukhuphela kunye nokufaka uhlobo olutsha lwe-Ubuntu MATE 20.04 LTS
Abaphuhlisi abaphethe Ubuntu Mate, babhengeze ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yale nkqubo, le ingu "Ubuntu Mate 20.04 LTS" ...
Kubuntu 20.04 LTS sele ikhutshiwe, yazi ukuba yintoni entsha
Ukulandela icandelo lokukhutshwa kweencasa ezahlukeneyo zenguqulo entsha ye-Ubuntu 20.04 LTS, kweli nqaku kufuneka sithethe Kubuntu 20.04
Ubuntu Lumina, ikamva elitsha le-distro yezo zithembiso zokuvusa izixhobo ezindala okanye zikhawuleze ngokukhawuleza kwezangoku
Ubuntu Lumina yiprojekthi entsha edibanisa izibonelelo zoBuntu kunye nemeko yokuzoba eyilelwe ukukhawuleza, ukukhanya nokusebenza.
UbuntuDDE: incasa yeshumi Ubuntu esemthethweni iza kufika nge-Deepin
UbuntuDDE yiprojekthi entsha ebonelela ngohlobo lwe-Ubuntu enendawo yemizobo ye-Deepin. Ithatha amanyathelo ayo okuqala, kodwa inokuba sesikweni.
Ubuntu Cinnamon 20.04 iphambi kwazo zonke ezinye iincasa kwaye ivula i-beta yayo yokuqala
Ubuntu Cinnamon 20.04 Beta ngoku iyafumaneka, phambi kwezinye iincasa ezisemthethweni. Iza neLinux 5.4 kunye nohlobo lwamva nje lweCinnamon Desktop.
I-Linux Mint 20, ene-Ulyana ene-codenamed, iya kusekelwa kwi-Ubuntu 20.04 kwaye ifumaneke kuphela kwi-64-bit
Sele siyazi ukuba i-Linux Mint 20 izakubizwa njani: igama lalo igama elingu-Ulyana kwaye liza kusekelwa kwi-Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Ngaba uyafuna ukubona ukuba umfanekiso wokugqibela we-Ubuntu Cinnamon Remix 20.04 uza kujongeka kanjani? Zama i-ISO yakho yamva nje
Ubuntu Cinnamon Remix 20.04 sele ifrize umfanekiso wayo, oko kuthetha ukuba sele sinokuvavanya oko bazokumilisela ngo-Epreli olandelayo.
Ubuntu Studio izakusweleka ... ukuba ayifumani nkxaso kuluntu
Kwakhona, kubonakala ngathi Ubuntu Studio inokunyamalala. Abaphuhlisi bayo bacela inkxaso yoluntu ukuba iqhubele phambili.
I-Zorin OS 15.2 ifika isekwe kwi-Ubuntu 18.04.4 LTS, uphuculo lwezixhobo kunye nokunye
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo abafana emva kophuhliso lweZorin OS babhengeza ukumiliselwa kwenguqulelo entsha yokuhanjiswa kwayo ...
I-Xubuntu 20.04 ikwavula ukhuphiswano lwayo lodonga lweFocal Fossa
I-Xubuntu 20.04 ivule ukhuphiswano lwayo lodonga. Abaphumeleleyo abathandathu bayakufakwa kwinkqubo yokusebenza eya kukhutshwa ngo-Epreli.
Abaphuhlisi bencasa ye-Ubuntu Budgie basimema ukuba sibe nefuthe kuphuhliso lwenguqulo elandelayo, Ubuntu Budgie 20.10.
Ukugqibela kweKubuntu 20.04 yemihla ngemihla Yakha iFossa Fossa sele isebenzisa uElisa njengomdlali womculo osilelayo. Kude kube ngoku ndisebenzisa iCantata.
Ubuntu Studio 20.04 ikwazisa ukhuphiswano lodonga, kodwa ukungena kwahlukile okwahlukileyo
Ubuntu Studio 20.04 ivule ukhuphiswano lodonga lweFocal Fossa. Ukuthatha inxaxheba, kuya kufuneka silayishe imifanekiso kwi-Imgur.
I-Xubuntu 20.04 LTS Focal Fossa ekugqibeleni iya kubandakanya umxholo omnyama
Ukukhutshwa kweXFCE ezayo ye-Ubuntu, i-Xubuntu 20.04 LTS Focal Fossa iya kujoyina imeko kwaye ekugqibeleni ibandakanye umxholo omnyama kuyo yonke le nkqubo.
Abaphuhlisi bolu hambo luhle baqhubele phambili ukuba i-OS 6 yamabanga aphantsi iya kusekelwa kwi-Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Inguqulelo entsha yeLinux Lite 4.8 imema Windows 7 abasebenzisi ukuba bafudukele kuyo
I-Linux Lite sisasazo sokuqala seLinux esekwe kuhlobo lweNkxaso yeXesha elide (i-LTS) yoBuntu kunye ...
Inguqulelo entsha ye-Ubuntu GamePack 18.04 ifika nohlaziyo kunye nokunye
Ubuntu GamePack lulwabiwo olusekwe kwi-Ubuntu OEMPack kwaye ijolise ikakhulu kwimidlalo, njengoko le distro ibonelela ...
Uluhlu lwe-SuperGamer V5 entsha, i-distro esekwe ku-Ubuntu kwimidlalo
Ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yokusasazwa kweLinux SuperGamer V5 kutshanje kubhengezwe, okuza ngokusekwe kwi-Ubuntu 19.10 kunye ...
Amathandabuzo acacisiwe: Ubuntu Studio 20.04 iya kuba luhlobo lweLTS
Kuninzi esele kuthethiwe ngayo kwaye intandabuzo sele icinyiwe: Ubuntu Studio 20.04 Focal Fossa iya kuba luhlobo lweLTS ... ekuqaleni.
ILubuntu 18.04 ayinakukwazi ukuphucula ngokuthe ngqo kwiLubuntu 20.04 Focal Fossa
Iqela likaLubuntu lisicebisa: ukuba usebenzisa uLubuntu 18.04, nyusela u-Eoan Ermine ngoku. Awuyi kuba nakho ukuphucula ngokuthe ngqo kwiFocal Fossa.
I-Linux Mint 20 iya kuqala uphuhliso emva kokwenza ulungiso kwinkqubo yokusebenza
Emva kokukhutshwa kwenguqulelo kaDisemba, uClement Lefebvre wakhankanya okokuqala iLinux Mint 20 kunye ne-LMDE 4.
Ungayihlaziya njani i-Linux Mint 19.3: ezinye iipakeji kufuneka zifakelwe ngesandla
Kule nqaku sikubonisa indlela yokuhlaziya kwiLinux Mint 19.3. Olunye utshintsho, kuya kufuneka ufake iipakeji ngesandla.
I-Linux Mint 19.3 Ikhutshwe ngokusesikweni kwezi ziNqaku
Iqela elikhokelwa nguClement Lefebvre likhuphe iLinux Mint 19.3, enegama elibhalwe "Tricia", inezinto ezithile ezibalulekileyo.
I-Linux Mint 19.3 ngoku iyafumaneka. Ukwaziswa ngokusesikweni kwiiyure ezimbalwa (okanye ngomso)
Ukuba ungomnye wabo bangakuthandiyo ukulinda, ngoku unokukhuphela iLinux Mint 19.3 Tricia kwiseva ye-FTP yeprojekthi. Okanye ngaba uya kulinda ixesha elide?
ILubuntu 20.04 Focal Fossa ivula ukhuphiswano lwayo lodonga
Kwiintsuku ezimbalwa emva ko-Ubuntu Cinnamon, uLubuntu 20.04 uvule eyakhe ukhuphiswano lweemifanekiso. Ngenisa imifanekiso yakho ngoku.
I-CAINE 11.0 ngoku ikhutshiwe, i-Ubuntu esekwe kwi-distro ye-forensics
Ukuphehlelelwa kwenguqulelo entsha yokusasazwa kweLinux CAINE 11.0 kutshanje kuzisiwe, ukuhanjiswa kweLinux ngokusekwe ku-Ubuntu ...
Inguqulelo entsha ye-OS Elementary 5.1 "Hera" sele ikhutshiwe
Emva kweenyanga ezininzi zophuhliso, ukumiliselwa kwenguqulelo entsha yosasazo lweLinux, i-OS yokuqala ye-5.1 "Hera" yaziswa ...
Ubuntu Budgie ukuvuka kwangoko kwakhona kwaye ungowokuqala ukuvula ukhuphiswano lodonga lweFocal Fossa
Akumangalisi ukuba ibe yeyokuqala kwakhona: Ubuntu Budgie 20.04 ivule ukhuphiswano lwayo lodonga kwinguqu elandelayo yenkqubo yokusebenza.
I-Linux Mint 19.3 "iTricia" yokuqalisa inguqulelo ye-beta ngomso
Umphuhlisi ophambili wenye yezona ndawo zidumileyo ezisasazeke Ubuntu esasaza izithembiso zokuphehlelela iLinux Mint 19.3 BETA ngomso ngoLwesibini.
Inguqulelo entsha yeZorin OS 15 Lite ifikile, yazi iindaba zayo
Ukukhutshwa kwenguqulo entsha engasindi yeLinux Zorin OS 15 kuye kwabhengezwa, eyakhiwa kusetyenziswa Ubuntu 18.04.2 LTS ...
I-Debian 10.2, ukukhutshwa kwesibini kwe-Buster ngoku kuyafumaneka
Iprojekthi Debian ikhuphe i-Debian 10.2, ehambelana nohlobo lwesibini lolondolozo lwenkululeko eyaziwa ngokuba yi "Buster".
I-Linux Mint 19.3, enegama elibhalwe "Tricia" kwaye iyafumaneka ngaphambi nje kweKrisimesi
UClement Lefebvre uqhubele phambili ngokuba iLinux Mint 19.3 iya kubizwa ngegama "iTricia" kwaye izakufumaneka ngaphambi nje kweKrisimesi.
Inguqulelo entsha yePop! _OS 19.10
Ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yePop! _OS 19.10, uguqulelo oluza notshintsho olwahlukileyo kwidesktop kunye ne ...
ILubuntu 19.10 sele iphakathi kwethu. Ifika nezi ndaba
Yintoni entsha ngeLubuntu 19.10, ukukhutshwa kuka-Okthobha u-2019 wencasa ye-LXDE yoBuntu, sele ikhutshiwe.
Kubuntu 19.10 ngoku iyafumaneka, yazi ukuba yintoni entsha
Namhlanje i-Canonical ikhuphe ingxelo entsha ye-Ubuntu 19.10 kunye neenguqulelo ezintsha zezinye iincasa zayo nazo ezikhutshiweyo ...
I-Linux Mint iyaqhubeka nokusebenza kwi logo yayo kunye nezinye iindaba eziphambili kule nyanga
UClement Lefebvre upapashe inqaku lakhe elifutshane kule nyanga kwaye kuyo usibonisa ukuba iilogo zeLinux Mint asebenza kuzo zinjani.
Ungayihlaziya njani i-Linux Mint 19.2 ukusuka kuhlobo lwangaphambili
UClement Lefebvre uthumele indlela echanekileyo nesemthethweni yokuphucula ukuya kwiLinux Mint 19.2 kwinguqulelo yangaphambili. Siyakucacisela.
Ngoku ewe, iLinux Mint 19.2 "Tina" ifumaneka ngokusemthethweni eCinnamon, MATE naseXfce
Njengoko kuthenjisiwe ngumvelisi wayo okhokelayo, iLinux Mint 19.2 "Tina" ngoku iyafumaneka eCinnamon, MATE, nakwiXfce enendawo yemizobo.
I-Linux Mint 19.2 "Tina" ngoku iyafumaneka! Kodwa lumka: ukumiliselwa kwayo akukho semthethweni okwangoku
Sele siyikhuphile imifanekiso yeCinnamon, Xfce kunye neMATE yeLinux Mint 19.2 "Tina", kodwa ukukhutshwa kwabo ngokusemthethweni kuyakwenzeka ngempelaveki.
I-Linux Mint 19.2 sele inomhla wokukhutshwa: kamva kule veki
UClement Lefebvre ubhengeze ukuba iLinux Mint 19.2 Tina izakukhutshwa kamva kule veki. Olu luhlaziyo olukhulu kunye nokuphucula okuninzi.
I-Linux Mint 19.2 "Tina", ngoku iyafumaneka kwi-beta yayo yokuqala eCinnamon, Xfce nakwiMATE
I-Linux Mint 19.2, enegama "Tina", ngoku iyafumaneka kwi-beta yayo yokuqala. Khuphela kwaye uzame yonke into eza kuza kolu lwabiwo lwaziwayo.
U-Lubuntu ukwasimema ukuba sithathe inxaxheba kukhuphiswano lwenkxaso-mali ye-Eoan Ermine
U-Lubuntu uvule umsonto ukuze nabani na onomdla angenise imifanekiso yabo kukhuphiswano lodonga lwe-Eoan Ermine.
Enye yeenguqulelo ezaziwa kakhulu ezisekwe kubuntu ziya kulahla i-32bits. Sithetha ngeLinux Mint kwaye iya kwenza njalo ukusuka kwinguqu elandelayo.
I-Regolith Linux, i-distro esekwe kuBuntu enomboniso olungileyo we-i3-wm
Olu lusasazo lweLinux olusekwe kwi-Ubuntu 19.04 kwaye ine-i3-wm umphathi wewindows njengeyona nto iphambili kuyo.
Inguqulelo entsha ye-BackBox Linux 6 ifika, isekwe kwi-Ubuntu 18.04
Xa sithetha ngolwabiwo olujolise kukhuseleko kunye nepentest, uninzi lolwabiwo olunje ...
Inguqulelo entsha yeZorin OS 15 ifika kwaye ezi ziindaba zayo
Kutshanje, ukumiliselwa kwenguqulelo entsha yosasazo lweLinux iZorin OS 15 sele inikezelwe, esekwe ...
Iphaneli yeKubuntu, zontathu iintlobo zeepaneli ekufuneka sizazi sonke
Kule nqaku sithetha ngeepaneli ezahlukeneyo zeKubuntu okanye zePhaneli zePaneli. Kukho iindlela ezintathu ezahlukeneyo. Yintoni le uyithandayo?
Kukhutshwa uhlobo olutsha lwePeppermint OS 10 kwaye olu lutshintsho lwalo
Emva phantse kweenyanga ezili-11 zokukhutshwa kwenguqulelo yangaphambili yePeppermint 9 kuza inguqulelo entsha uPeppermint 10 eqhubeka nokuthatha ...
URobolinux: usasazo olukhulu lweLinux lwabasebenzisi abatsha abafuna iiWindows
Ngaba uyafuna ukusebenzisa usetyenziso lweWindows kwiLinux? URobolinux yinkqubo yokusebenza esekwe kwi-Debian eya kwenza izinto zibe lula kuwe.
Uyifaka njani inguqulelo yePlasma yamva nje kwi-Kubuntu 18.04 LTS
Kule nqaku siza kukufundisa amanye amaqhinga ukuze ukwazi ukufaka uhlobo lwamva nje lwe-KDE Plasma kwi-Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver.
IPlasma 5.16 iya kwazisa ngezaziso ezintsha kwaye ungaphazamisi imo
Uluntu lwe-KDE lusixelela ukuba inkqubo yesaziso iya kuba njani kwiPlasma 5.16 kwaye iya kuba mihle. Fumana yonke into apha.
Izicelo ze KDE 19.04 zingenako ukuyenza Kubuntu 19.04
Kubonakala ngathi ekugqibeleni i-KDE Izicelo 19.04 ayizukuyenza Kubuntu 19.04. Apha sixelela ukuba iza kufika nini kwaye kutheni ingafikanga.
I-L4T Ubuntu, iLinux yeTegra kunye ne-Ubuntu esekwe kwi-distro yeNintendo switch
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo iqela le-switchroot lisandula ukupapasha i-L4T Ubuntu, eyiprojekthi esekwe kwiphakheji yeLinux yeTegra (L4T) kunye noBuntu
Kutheni le nto uKubuntu esebenzisa ibhetri engaphezulu kwezinye iincasa
Ngaba uKubuntu wakho usebenzisa ibhetri engaphezulu kunokuba ubungathanda? Kweli nqaku siza kuthetha ngotshintsho olunokubangela umdla.
Inguqulelo entsha yeVoyager GE 19.04 sele ikhutshiwe
IVoyager GE 19.04 iphucula ukusebenza kweGnome Shell 3.32 kunye namava omsebenzisi ngokongeza izikripthi ezifakiweyo kunye nezandiso ...
UKubuntu 19.04 ufika ngePlasma 5.15.4 kunye neWayland, kodwa kuvavanyo
I-Kubuntu 19.04 Disco Dingo iza nohlobo lwe-KDE Plasma 5.15.4 kunye neseshoni yeWayland ekhoyo kwinqanaba lokulinga.
_OS 19.04 ekhutshiweyo kunye neGnome 3.32, iKernel 5.0 kunye nokunye
Abaphuhlisi beNkqubo76 babhengeze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukumiliselwa kwenguqulelo entsha yenkqubo yabo yokusebenza yePop! _YOU…
IFeren OS 2019.04 ifika inemixholo emitsha, ii-squids kunye nokunye
I-Feren OS 2019.04 yazisa ngemifanekiso emitsha yamaphephadonga, imixholo emitsha kunye nesifaki esitsha sokudityaniswa kwe-64-bit, kunye neKernel 4.18 ...
I-Xubuntu 19.04 ibuyisa i-GIMP kwaye ixhasa amakhonkco e-AptURL
I-Xubuntu 19.04 ngoku iyafumaneka, uhlaziyo olubaluleke kakhulu kuhlobo lweXfce lwenkqubo yokusebenza ephuhliswe yiCanonical.
I-Okular izakuvumela ukubonisa kunye nokuqinisekisa utyikityo kwiPDF kwizicelo ze-KDE 19.04
I-Okular iya kongeza inqaku elinomdla kakhulu kwi-KDE Izicelo ze-19.04: ukukwazi ukubonisa kunye nokuqinisekisa ukusayinwa kwidijithali kwi-PDF.
Isibhengezo sokukhutshwa kwenguqulo elandelayo yeLinux Mint 19.2 enegama lekhowudi uTina, nangona kwabanye kubonakala ngathi sisinye isibhengezo se ...
Ubuntu Mate 1 Beta 18.04 ikhutshelwe iRaspberry Pi
Abaphuhlisi abajongene neprojekthi ye-Ubuntu Mate babhengeze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukuba benza i-beta yokuqala ye ...
Uyisebenzisa kanjani umphathi wefayile yeDolphin njengomsebenzisi wengcambu ...
Kule nqaku siza kukubonisa iqhinga lokusebenzisa iDolphin njengomsebenzisi wengcambu, ukhetho olukhubazeke ngokungagqibekanga kukhuseleko.
Inguqulelo ye-beta ka-Ubuntu Budgie 19.04 iyafika kwaye ezi ziindaba zayo
Le nguqulo intsha ye "Disco Dingo" iphawula utshintsho kwiKernel 5.0 entsha kwi-Ubuntu Budgie 19.04 kunye neBudgie Desktop 10.5 kunye ...
I-beta entsha yeZorin OS 15 ngokungqinelanisa i-Android kunye nokunye sele kulungile
Ngokukhutshwa kwale nguqulo intsha ye-beta yeZorin OS 15 singafumanisa ukuba inikezela ukusebenza okuphuculweyo, kunye nemboniso ...
IPlasma 5.16 kunye nezicelo ze KDE 19.04: ezi ziimpawu ezintsha eziza kubandakanya
Kule posi siza kukuxelela zonke iindaba eziza kuvela kwisandla se KDE Plasma 5.16 kwaye ziya kufumaneka kwi-Kubuntu 19.04 Disco Dingo.
Inguqulelo entsha yePuppy Linux 8.0 ifika, isisasazi seekhompyuter eziphelelwe lixesha
I-Puppy Linux lusasazo lweLinux oluqukethe i-CD ezenzekelayo eneMphathi weWindows kunye neenkqubo ezaneleyo zoku ...
Ndizamile uKubuntu kwakhona kwaye ndonwabile. Ndikuxelela ukuba kutheni
Emva kwethutyana ukuphinda uzame uKubuntu, ndiyigcina njengenkqubo ephambili. Ndicacisa ukuba kutheni ndicinga ukuba yeyona nto intle Ubuntu.
ExTiX 19.3: Ubuntu bokuqala be-19.04 kunye neKernel 5.0
I-ExTiX 19.3 ngoku iyafumaneka, inkqubo yokuqala yokusebenza esekwe kwi-Ubuntu 19.04 Disco Dingo kunye neLinux Kernel, 5.0.
I-Lubuntu 16.04.6 RCs icela uncedo olukhawulezileyo ukuze kuvavanywe
Abaphuhlisi beLubuntu bacela uluntu ukuba luncede kuvavanyo lwenkqubo yabo elandelayo, iLubuntu 16.04.6.
Abaphuhlisi abaQalayo bazise isiKhangeli seWebhu esiSingxayo
Omnye wabasunguli beprojekthi ye-Elementary OS, esekwe ku-Ubuntu, kutshanje ...
Inguqulelo entsha ye-Escuelas Linux 6.2 ifika noHlelo lweLifa kunye nokunye
Ndonwabile ukwazisa ukuba kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kukhutshiwe inguqulelo entsha ye "Escuelas Linux", le ifika ne ...
Isikhokelo sokufakwa kweLinux Mint 19.1 Tessa
Emva kokukhutshwa kwenguqulelo entsha yeLinux Mint 19.1 Tessa, masabelane newbies ngokulula ...
Inguqulelo entsha yeNitrux 1.1.2 sele ikhutshiwe
INitrux sisasazo seLinux esekwe ku-Ubuntu esifanelekileyo kwiilaptops nakwiidesktops, nge ...
Kutshanje sithethe ngeLinux Mint 19.1 Tessa beta release apha kwibhlog ...
Inguqulelo yeLinux Mint 19.1 beta iyafumaneka «Tessa
Inguqulelo entsha yeLinux Mint 19.1 "Tessa", kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo iinguqulelo ze-beta zosasazo lwe-Linux ezisekwe ku-Ubuntu zakhutshwa.
I-LXpup: Ukuhlanganiswa kwePuppy Linux, Ubuntu kunye neLXDE
Ngeli xesha siza kuthetha nge-LXpup namhlanje, isiphumo sePuppy kodwa nge-LXDE ethi yona isekele Ubuntu. I-LXPup yinguqulelo ...
Inguqulelo entsha yeVoyager izelwe, uVoyager Gnome Shell 18.10
I-Voyager yabelana ngesiseko esifanayo kunye nesoftware eqhelekileyo, efanayo yokugcina i-APT, igama elifanayo lekhowudi, kunye nomjikelo wophuhliso ofanayo.
Inguqulelo entsha ye-Ultimate Edition Gamers 6.0 ngoku iyafumaneka
UHlelo lokuGqibela, luphuma kuBuntu nakwiLinux Mint. Injongo yeprojekthi kukudala inkqubo yokusebenza epheleleyo, ehlanganisiweyo engenamthungo ...
Inguqulelo entsha yeLinux Lite 4.2 sele ikhutshiwe
I-Linux Lite sisasazo seLinux esiqala ngokusekwe kwiNkxaso yexesha elide (LTS) yoBuntu kwaye inendawo yeXFCE ...
Faka Ubuntu 18.10 kwiRaspberry yakho ngeRaspEX LXDE
I-RaspEX LXDE yinkqubo eyenziweyo ngumphuhlisi u-Arne Exton, umphuhlisi lo wenze iinkqubo ezininzi zeRaspberry pi ...
Inguqulelo entsha yeFeren OS 2018.10 ngoku iyafumaneka
UFeren OS usasazo lwe desktop kwiLinux esekwe kuhlelo oluphambili lweLinux Mint. Lo unendawo ye desktop yeCinnamon ...
Inguqulelo entsha ye-Ubuntu Budgie 18.10 ilungile
Ubuntu Budgie yenye yeencasa zoBuntu esinokuthi sizifumane ngokusesikweni kwaye ezixhaswe yiCanonical ...
Inguqulelo entsha yePop! _OS 18.10
Emva kokuphehlelelwa ngokusesikweni kwenguqulelo entsha nohlaziyo lwe-Ubuntu engu-18.10, ulwabiwo lwaqala ukuthunyelwa ...
Inguqulelo entsha ye-Elementary OS 5 Juno ngoku iyafumaneka
Ngale nto ikhutshiweyo yenguqulo entsha 5 uJuno uphucula inkqubo kwiindawo ezininzi. Abaqulunqi beenkqubo banokuyonwabela imeko yophuhliso.
I-XubEcol: i-Xubuntu esekwe kwi-distro elungiselelwe ukusetyenziswa ezikolweni
I-distro esiza kuthetha ngayo inegama elithi XubEcol, ikhathalogu yayo ngaphezulu kwenkqubo kodwa njengesisombululo esinokufakwa ...
Inguqulelo entsha yeQuirky Linux 8.7.1 sele ikhutshiwe
I-Quirky 8.7.1 itshintsha iiphakheji ezisisiseko zokuhanjiswa kwe-Ubuntu 16.04 ukuya kwi-18.04. Utshintsho lwenzelwa ukwakha i-Ubuntu Bionic Beaver
I-beta yesibini ye-Elementary OS 5.0 ilungile ngeempawu ezintsha
UCody Garver kutshanje ubhengeze ukubakho kwe-beta yesibini yoluntu yenkqubo yakhe ezayo, i-Elementary OS 5.0 Beta ...
Izikolo iLinux ijika i-20 kwaye isanda kukhupha inguqulelo yayo engu-6.1
Njengoko igama layo libonisa, i-Escuelas Linux sisasazo sasimahla seLinux esineenjongo eziphambili kumaziko emfundo eSpain nakwabanye ...
Khawulezisa iXubuntu yakho ngala maqhinga alula
I-Xubuntu sisongo esisesikweni se-Ubuntu esenzelwe iikhompyuter ezinezixhobo ezimbalwa. Akukhanyi njengo Xubuntu kodwa ...
Dibana ne-OSGeoLive 12.0 usasazo olusekwe kuLubuntu
UCameron Shorter ubhengeze ukukhutshwa kwe-OSGeoLive 12.0, olona hlaziyo luphambili kusasazo lweprojekthi, ngokusekwe ...
Inguqulelo entsha yokusasazwa kweLinux ExTiX 18.9 ifika
I-ExTiX yindawo yasimahla nevulekileyo yokuhanjiswa kwe-GNU / Linux esekwe kwi-Ubuntu 18.04.1 (Bionic Beaver) kunye neenkqubo zokusebenza kweDebian 9 (Stretch)
I-Linux Mint 19.1 iya kukhutshwa ngo-Novemba olandelayo kwaye iya kubizwa ngokuba yiTessa
Iqela leLinux Mint liqinisekisile ukuphuculwa kwenguqu enkulu elandelayo yeLinux Mint, iya kuba yiLinux Mint 19.1 enegama lesidlaliso iTessa kunye neCinnamon 4
Inguqulelo entsha yeNitrux 1.0.15 ngoku iyafumaneka
Le Nitrux 1.0.15 entsha ikhupha inqaku le-hardware ehlaziyiweyo, phakathi kwezinye izinto, kunye nohlobo olutsha lweLinux Kernel ...
U-Lubuntu uza kusebenzisa i-Wayland kodwa ayizukude i-2020
Inkokheli yeprojekthi kaLubuntu ithethile kwaye ngeli xesha uthethile ngeLubuntu kunye neWayland, i-graphic server eyaziwayo eyakubakhona e ...
Inguqulelo entsha yeBodhi Linux 5.0 ngoku iyafumaneka
Inguqulelo entsha yeBodhi Linux 5.0 ikhutshwe kutshanje kwaye ngoku kukhutshwa kwenkqubo entsha sinokufumana uthotho lokuphuculwa, amanqaku
Inguqulelo entsha yeZorin OS 12.4 ngoku iyafumaneka
I-Zorin OS okwangoku, kunye ne-Chalet Os2 kunye ne-Q4OS, enye yezinto ezimbalwa ezabelwe i-GNU / Linux ene-interface yomsebenzisi efana neWindows.
IGuadalinex v10 ayisebenzi, inguqulelo entsha elandelayo ekuvukeni kweLinux Mint
IGuadalinex v10 Unofficial yinguqulelo entsha yeGuadalinex. Inguqulelo esekwe kwi-Ubuntu 18.04 kwaye izisa isinamon njenge-desktop yosasazo
Iziphumo ezi-4 zoBuntu zamaqela anengeniso ephantsi
Ngeli xesha siza kuzisa ezinye zezona zinto zisasaziweyo ezivela ku-Ubuntu, ezijolise kumaqela ezinto ezinesibonelelo esiphantsi.
Namhlanje siza kwabelana nawe ngendlela elula yokuphucula ukusuka kwiLinux Mint 18 Sylvia ukuya kwiLinux Mint 19 Tara, esi sikhokelo sesewbies
Uyenza njani iPDasma Plasma ijongeke njengoBunye?
Ukuze siguqule iPlasma ibe yiUmanyano siza kusebenzisa isixhobo esikwi-desktop ye-KDE. Kufuneka nje siye kwimenyu yezicelo zethu kwaye sikhangele ukuJonga kwaye uzive, esinye isixhobo siza kuvela sibizwa ngokuba "ngumhloli wembonakalo" kodwa ayenzi njalo. ungakhumbuli ukuba yintoni Jonga kwaye uzive.
Isikhokelo sokufaka iVoyager Linux 18.04 LTS
Kanye njengokufumaneka kweVoyager 18.04 LTS kunye nazo zonke izinto zayo kubhengeziwe kwisithuba esedlule, ngalo mzuzu ndithatha ithuba lokwabelana ngesikhokelo sokufaka kunye nawe. Kubalulekile ukuba ndikhankanye iVoyager Linux ngaphandle kokuthatha iXubuntu njengesiseko, umphuhlisi wayo ...
IVoyager 18.04 LTS ngoku iyafumaneka
Molo kusasa, kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo ingxelo entsha ezinzileyo yesiFrentshi esekwe kwiXubuntu yasungulwa ngokusesikweni, iVoyager Linux, ukuhanjiswa apho sele ndikhankanyile amaxesha amaninzi kule bhlog. IVoyager Linux ayilulo olunye ulwabiwo, ukuba akunjalo ...
Ukuhanjiswa kwe-FriceOS e-Argentina esekwe ku-Ubuntu
I-FriceOS okwangoku ikwinguqulelo yayo ye-FriceOS G kwaye isekwe ku-Ubuntu njengoninzi lwe-distros iya kuba nohlaziyo olukhawulezileyo kwakamsinya nje emva kokuba kukhutshwe ingxelo ezinzileyo ye-Ubuntu 18.04 LTS. Ngaphakathi kwezicwangciso zabaphuhlisi beFriceOS ngoMeyi baya kuthi bakhuphe ingxelo entsha.
Dibana neNitrux, intengiso entle esekwe Ubuntu
I-Nitrux sisasazo se-Ubuntu esekwe kwi-linux eza nemeko yayo ye-Nomad desktop eyakhelwe kwi-KDE Plasma 5 kunye ne-QT, uNomad uthatha konke okusemgangathweni ukuze azise idesktop ebonakalayo enomtsalane, ethi yona indikhumbuze kakhulu kwiPantheon.
Inguqulelo yoVavanyo lwePop! _OS 18.04 ngoku iyafumaneka
I-Pop! _OS lulwabiwo lwe-Linux olusekwe ku-Ubuntu, oku kuphuhliswa yi-System76 engumenzi owaziwayo weekhompyuter ezine-Linux ezifakwe kwangaphambili. Inendawo ye-desktop ye-GNOME enomxholo wayo we-GTK kunye nee icon.
Uhlaziyo olutsha iZorin OS 12.3 yomelele kwaye iyaguquguquka ngakumbi
Ewe, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, abafana abaphethe uphuhliso lweZorin OS ngesiteyitimenti esisemthethweni babelane nawo wonke umntu inguqulelo entsha yale nkqubo, nangona inguhlaziyo lwenguqulo ye-12.
Isikhokelo sokufaka iVoyager GS Gamer 16.04
Kweli nqaku ndiza kukubonisa ukuba ungayifaka njani iVoyager GS Gamer 16.04 enale ilandelayo: Steam - Steam login, Enoteca 2.11, Winetricks, Gnome Twitch, Enhydra kwaye ngakumbi ulwenziwo lweVoyager olwenza ukuba lube nomtsalane ngokubonakalayo.
IVoyager Linux sele ineBeta 18.04 LTS entsha
Olu luhlu lokulungiswa olusetyenziswa nguXubuntu njengesiseko, esisusa ezinye zeenkqubo ezingagungqiyo esizifumana kwiXubuntu kwaye zongeza ezinye kunye nezinye izinto ezibonakalayo kuzo.
Elementary 5.0 "Juno" iya kusekelwa kwi-Ubuntu 18.04 LTS
Inguqulelo enkulu elandelayo ye-Elementary OS, i-Elementary 5.0 "Juno" iya kusekelwa kwi-Ubuntu 18.04 LTS, inguqulelo ye-LTS ye-Ubuntu eya kuthi ixhase iindaba zenguqulo ezifanayo kakhulu neMacOS esinayo eGnu / Linux ...
Faka Ubuntu Mate kwiRaspberry Pi kwinkqubo yakho
Nangona kukho ukusasazwa kweRaspbian, okwangoku ndikhetha ukushiya olu khetho ecaleni, ke ndikhetha ukufumana Ubuntu kwesi sixhobo sincinci. Ukuze ukonwabele Ubuntu, siya kusebenzisa umfanekiso abasinika wona nge-Ubuntu Mate, ke kufuneka siye ...
Isikhokelo sokufakwa kweXubuntu 17.10 inyathelo ngenyathelo
I-Xubuntu yenye yeenguqulelo ezizezinye ezine-Ubuntu, apho umahluko ophambili yindawo ye-desktop, ngelixa ku-Ubuntu 17.10 inendawo ye-desktop yeGnome Shell ngokungagqibekanga kwi-Xubuntu sinendawo ye-XFCE.
I-Zorin OS 12 enye indlela ebalaseleyo kwabo bafudukayo bevela kwiWindows
Kwinqaku lam elidlulileyo, ndibhengeze malunga nohlobo olutsha lweFeren OS, ulwabiwo olufuna ukufumana umhlaba kunye nabasebenzisi beWindows kunye nabo bafudukayo kuyo. Ngeli thuba, makhe ndithethe ngenye indlela esinokuthi siyinike abasebenzisi abafudukayo bevela kwiWindows ...
I-distro yaseBritane iFeren OS ihlaziyiwe
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo bendincokola kancinci malunga neFeren OS, ukuba usasazo lwe-Linux lwaseBritane olusekwe kwiLinux Mint enezinto ezininzi ezipholileyo ezinokubhenela abantu abatsha kwihlabathi leLinux kwaye bafudukayo bevela kwiWindows.
Faka i-kernel 4.14.13 ukulwa neMeltdown
Ngeengxaki zokhuselo zamva nje eziveliswe kwiiveki zakutshanje ngokubhekisele kuhlaselo lweMeltdown kunye neSpecter, iinkampani ezinkulu zesoftware zibeke umsebenzi omninzi wokufumana nokusombulula oku.
Cwangcisa i-hard drive yakho kunye noClonezilla
Ngeli xesha siza kujonga iClonezilla, le yinkqubo yasimahla yokwenza idiski efana neNorton Ghost, ehlawulwayo, iClonezilla ineenguqulelo ezimbini, ongumfanekiso ophilayo kunye nolunye oluhlelo lweseva.
Ukuhanjiswa kwe-Linux esekwe Ubuntu kwi-ExTiX 18 ye-newbies.
I-ExTiX 18 kukusasazwa kweLinux esekwe ku-Ubuntu kwaye ineendawo ezahlukeneyo zedesktop phantsi kwengubo yayo, apho sifumana uBudgie, Deepin, KDE
Ukuhanjiswa kwe-Feren OS esekwe kwi-Ubuntu kunye neLinux Mint
UFeren OS usasazo lwe-Linux lwaseBritane olusekwe kwi-Ubuntu nakwiLinux Mint, uFeren uthatha iimpawu zeLinux Mint enye yazo yindawo ...
I-Linux Mint 18.3 Sylvia beta inguqulelo ekhutshwe ngokusemthethweni
Ukusukela ngenyanga kaSeptemba sakunika iindaba malunga nezicwangciso ezazinalo iqela leLinux Mint kwinguqulelo ye-18.3, kunye neendaba ...
Faka ingxelo yesibini yolondolozo lweKernel 4.13.2
Kule nguqulo intsha yokugcina u-4.13.2 sifumana uhlaziyo lwe-AmdGPU kunye ne-Nvidia driver kunye nokulungiswa kwe-bug, ukulungiswa kwenethiwekhi ...
I-Voyager Linux French distro esekwe kwiXubuntu
IVoyager Linux yiFrench distro esekwe kwiXubuntu kwaye ngenxa yoko inqaku kukusetyenziswa kweXFCE desktop bume, ukubonakala kwayo kusekwe ...
Iimpawu ezintsha eziphambili zeLinux Mint 18.3
Umyili weLinux Mint utyhile ukuba uguqulelo lwe-18.3 lwenkqubo yokusebenza luza kuza nesixhobo esitsha sokulondoloza esingasayi kufuna Ingcambu
Faka iLinux kernel 4.12.5 kwi-Ubuntu 17.04
Iintsuku ezimbalwa ezidlulileyo inguqulo 4.12.5 ikhutshiwe, le inguhlobo lwesihlanu lolondolozo lweLinux Kernel 4.12.
Isikhokelo sokufakwa kweLinux Mint 18.2 Sonya
I-Linux Mint 18.2 Sonya ligama elitsha lenguqulelo entsha yokusasazwa kweLinux esekwe kubuntu, kunye nokuphucula ukuhanjiswa kwefayile
I-Linux Lite 3.6 iya kufumaneka ngo-Septemba 1
I-Linux Lite sisasazo seLinux esekwe ku-Ubuntu, ibonakaliswa kukusetyenziswa okuncinci kwezixhobo ezizisebenzisayo kuba isebenzisa i-desktop ye-XFCE.
ICanonical yazisa ukuhanjiswa kwayo ngeKubernetes 1.7
I-Canonical ihlaziye ukuhanjiswa kwayo ngeKubernetes. I-Kubernetes 1.7 sele ikolu lwabiwo lweeseva kunye nabaphuhlisi ...
I-Linux AIO Ubuntu 17.04, umfanekiso we-iso ukuzilawula zonke
I-Linux AIO Ubuntu 17.04 ngumfanekiso omtsha we-ISO weprojekthi osinika ithuba lokuba ne-Ubuntu yamva nje ngaphandle kokutshintsha umfanekiso wokufaka
Ukufumanisa kuya kuba nakho ukufaka usetyenziso kwifomathi ye-snap
Ubuntu kunye nabaphuhlisi be KDE baqinisekisile umsebenzi abawenzayo ukwenza ukufumanisa, iziko lesoftware ye KDE, ehambelana ne-snap ...
Elementary OS ijongeka ngakumbi nangakumbi njengeMacOS
Elementary OS kutshanje ihlaziyiwe, uhlaziyo olwenza ukuba i-Ubuntu esekwe kwi-distro ifane neMacOS ...
I-LinuxMint 18.2, inguqulelo entsha eza nazo zonke iincasa ezisemthethweni
Ngoku ikhona inguqulelo entsha yeLinuxMint, iLinuxMint 18.2, uguqulelo oluza nazo zonke iincasa zalo ezisemthethweni, into engenzeki rhoqo ...
Isoftware Boutique, ivenkile entsha yesicelo soBuntu MATE
Ubuntu MATE uya kuba nomphathi weSoftware omtsha. Le app ibizwa ngokuba yiBoutique Software. Le app iya kuba nezinto ezintsha ezipholileyo ...
Ubuntu MATE ekugqibeleni uza kuba neMIR
Abaphuhlisi be-Ubuntu MATE baqinisekisile ikamva le-MIR ngokulisebenzisa kwincasa yalo esemthethweni kwaye bangasebenzisi i-Wayland njengeseva yemizobo ...
INetplan iya kusebenza ku-Ubuntu 17.10
INetplan yiprojekthi yoBuntu eza kuphunyezwa kwaye isetyenziswe ngokungagqibekanga ku-Ubuntu 17.10 ukulawula iinethiwekhi kunye nokusetyenziswa kweekhompyuter ...
I-Plasma 5.10 iza ku-Kubuntu 17.04 enkosi kwii-backports
I-Plasma 5.10 ekugqibeleni iza ku-Kubuntu 17.04, inguqulelo ehlaziyiweyo eneebugs ezinzileyo ngokubonga kwizitishi zangasemva ...
I-Linux Mint 18.2 "Sonya" KDE Beta Edition Amatyala nge-KDE Plasma 5.8 LTS Desktop
I-Linux Mint 18.2 "Sonya" KDE Beta iza ne KDE Plasma 5.8 LTS imeko-bume ye desktop kwaye isekwe kwinkqubo Ubuntu 16.04.2 LTS (Xenial Xerus).
Utshintsha okanye ufake umxholo wedesktop ku-Ubuntu Budgie
Ubuqhetseba obuncinci ngendlela yokwenza ngokwezifiso Ubuntu Budgie. Kule meko siza kubona indlela yokutshintsha okanye yokufaka umxholo omtsha wedesktop kwiBudgie Desktop
Sebenzisa iGoogle Drayivu kwiLubuntu yakho
Isikhokelo esincinci sendlela yokufaka kunye nokusebenzisa i-OverGrive kwiLubuntu yethu ukuze sibe nokusebenza kunye noGoogle Drayivu kunye neenkonzo zayo ...
Ngoku unokukhuphela iLinux Mint 18.2 "Sonya" Cinnamon kunye neMATE Beta
UClement Lefebvre ubhengeze ukukhutshwa kunye nokufumaneka kwangoko kweenguqulelo zeBeta zeLinux Mint 18.2 "Sonya" Cinnamon kunye neMATE.
IBodhi Linux 4.2 ngoku iyafumaneka; Inguqulelo yokuqala engayi kuba nenkxaso ye-32-bit
IBodhi Linux 4.2 ngoku iyafumaneka. Le nguqulo intsha yokuhambisa isebenzisa i-E17 kunye neMoksha njengeyona desktop iphambili izisa i-kernel entsha kunye nenye into
I-Peppermint 8, usasazo olusekwe kwi-Ubuntu 16.04.2 LTS eneLinux Kernel 4.8 ebhengeziweyo
Kwaziswa ukukhutshwa kunye nokufumaneka kwangoko kokuhanjiswa kwePeppermint 8, esekwe kwi-Ubuntu 16.04.2 LTS kunye neLinux Kernel 4.8.
ICinnamon 3.4 imeko yendalo yedesktop ihlaziywa kwiLinux Mint 18.2
Ukukhutshwa kokuqala kokugcinwa kwe desktop yeCinnamon 3.4 ngoku kuya kubakho, okuya kubandakanywa kwinkqubo yokusebenza yeLinux Mint 18.2.
Ukusasazwa kwamashishini amnyama eLebhu kwiLinux ye-11.0.1, esekwe ku-Ubuntu, ishiya i-GNOME 3 ngokutshintshela uMATE
Ukuhanjiswa kweLebhu yeLabhoratri eMnyama yeLinux 11.0.1, esekwe kwi-Ubuntu 16.04.2 LTS (Xenial Xerus), ithatha indawo ye-GNOME 3 desktop nge-MATE.
Ubuntu Core iba yinkqubo yesibini yokusebenza ye-IoT
Ubuntu Core, inkqubo yeCanonical yokusebenza ye-IoT ifike kwindawo yesibini phakathi kweenkqubo zokusebenza ze-IoT, iinkqubo ezigqithileyo ezinje nge-Android
Ukuhanjiswa kwe-Emmabuntus 3 1.04 ngoku kuyafumaneka, ngokusekwe kwiXubuntu 14.04.1 LTS
I-Emmabuntus 3 1.04 lulwabiwo olusekwe kwiXubuntu 14.04.1 LTS ngeLinux Kernel 3.13. Ukusetyenziswa kwayo kujolise kwicandelo lezemfundo.
I-Plasma 5.10 iza kuza nefomathi ye-snap kunye nefomathi yeplatpak
Inguqulelo ye-beta yePlasma 5.10 ngoku iyafumaneka ukuyivavanya kwaye ubone ukuba yintoni entsha eza kuba neprojekthi ye KDE.
I-KDE Plasma 5.9.5, Krita 3.13 kunye ne-digiKam 5.5 ziyeza kungekudala kubasebenzisi be-Kubuntu 17.04
I-KDE Plasma 5.9.5, Krita 3.13, digiKam 5.5, kunye nezinye iipakeji ezihlaziyiweyo ziye zaya kwiBuntu 17.04 backports kungekudala.
Uyifaka njani iLinux Kernel 4.11 kwi-Ubuntu kunye neLinux Mint
Isifundo esilula esinenkcazo yenyathelo nenyathelo yokufaka i-Linux Kernel 4.11 kwiinkqubo zokusebenza ze-Ubuntu kunye neLinux Mint.
I-Linux Mint 18.2 iya kubizwa ngokuba ngu "Sonya" kwaye iza neCinnamon 3.4 kunye ne-LightDM
Inkqubo yokusebenza yeLinux Mint 18.2 "Sonya" ikwinkqubela phambili epheleleyo kwaye iya kuba neCinnamon 3.2 desktop kunye nomphathi weseshini ye-LightDM.
Ukuthobela, ukufakwa kweCanonical entsha kwi-Ubuntu Server
Abaphuhlisi be-Ubuntu abaliqela benze i-installer entsha ebizwa ngokuba yi-Subiquity esetyenzisiweyo kwi-Ubuntu Server, uguqulelo olusaphuhlayo ...
Iinguqulelo zemihla ngemihla ze-Ubuntu 17.10 ngoku ziyafumaneka
Sele kufuneka sivavanye iinguqulelo zokuqala zemihla ngemihla ze-Ubuntu 17.10, ezinye iinguqulelo eziza kusibonisa uguqulelo lwe-Ubuntu oluzayo ...
I-Budgie 10.3 ngoku iyafumaneka; Sikuxelela ukuba ungayifaka njani Ubuntu
I-Budgie 10.3 yinguqulelo entsha yeBudgie enezinto ezininzi ezaziwayo zokulungisa i-bug kwaye isebenzisa iilayibrari ze-GTK3.Sikuxelela ukuba ungayifumana njani Ubuntu
I-ExTiX 17.4, ulwabiwo olutsha olusekwe kwi-Ubuntu 17.04 kunye ne-desktop LXQt 0.11.1
Ukuhanjiswa kwe-ExTiX 17.4 ngoku kuyafumaneka ukukhuphela kunye ne-LXQt 0.11.1 kwimo ye desktop kunye neLinux Kernel 4.10.0-19-exton. Kwakhona, isekwe kwi-Ubuntu 17.04.
UHlelo lokuGqibela 5.4, ulwabiwo lokuqala lweLinux esekwe kwi-Ubuntu 17.04
UHlelo lokuGqibela 5.4 luguqulelo lokugqibela oluzinzileyo lolu hambiso ngokusekwe kwi-Ubuntu 17.04. Sityhila ezona mpucuko ziphambili kunye neendaba.
I-LightDM iya kuba ngumphathi weseshoni omtsha kwiLinux Mint 18.2
Inkokeli yeLinux Mint isandula ukubhengeza iindaba zeLinux Mint 18.2 phakathi kwayo eyakuba lutshintsho ukusuka kwi-MDM ukuya kwi-LightDM ...
I-LXLE 16.04.2 ithembisa ukuba yeyona nguqulelo ilungileyo yokuhambisa ukuza kuthi ga ngoku
I-RC ye-LXLE 16.04.2 ngoku iyafumaneka, inguqulelo esekwe kwi-Ubuntu 16.04.2 LTS kodwa notshintsho oluthile kwiikhompyuter ezinezixhobo ezimbalwa ...
Ezi zezinye zeempawu ezintsha zeencasa ze-Ubuntu 17.04 ezisemthethweni
I-flavour esemthethweni ye-Ubuntu 17.04 sele ine-beta yokugqibela. Le beta isibonisa ezinye iinkcukacha kunye neendaba abaya kuba nazo kwinguqulelo elandelayo ...
Ubuntu 17.04 sele ineBeta yayo yokugqibela
Ubuntu 17.04 uphuhliso lufikelela esiphelweni. Namhlanje i-beta yokugqibela isungulwe, i-beta engenakho kodwa ineendaba ezimnandi ...
Indlela yokuba nedokethi eLubuntu
Isifundo esincinci sendlela esinokuba nayo kwiLubuntu yethu okanye kwi-Ubuntu yethu ene-LXDE idokethi encinci kodwa esebenzayo yedesktop esinceda yonke imihla ...
I-Twitter Plasmoid, umphelelisi ogqibeleleyo weKubuntu
I-Twitter Plasmoid yiplagi encinci yeKubuntu ezisa imisebenzi esisiseko ye-Twitter kwi-KDE desktop ...
Dibana nezinye iincasa ze-Ubuntu 17.04 Zesty Zapus
Ngokufika kwe-Ubuntu 1 beta 17.04 kunye neencasa zayo eziphambili, sithetha ngezinye zezinto eziphambili abazibandakanyayo.
ILubuntu 17.04 ekugqibeleni ihlala ukuba yi-LXQT
Okokugqibela nasemva komsebenzi omninzi, abaphuhlisi beLubuntu abakwazanga ukufumana uLubuntu 17.04 ukuba abe ne-LXQT desktop endaweni ye-LXDE ...
Ubuntu buya kuba nesigcina-ntloko seNene
Ubuntu buya kuba nayo nesigcina-ntloko seNene esingathandabuzekiyo, esi sixhobo siza kuziswa kwi-MWC elandelayo e-Barcelona ...
I-Budgie-remix 16.04.2 sele ibandakanya Ubuntu 16.04.2 LTS HWE Kernel
I-Budgie-remix ihlaziywa kwi-16.04.2 LTS elandela indlela yolunye uhambiso olusekwe ku-Ubuntu. Kubandakanya i-kernel 4.8 kunye neMesa 3D 12.0.
I-Arkas OS, indawo entsha esekwe kuBuntu kubazobi
I-Arkas OS lulwabiwo olutsha olusekwe ku-Ubuntu kwaye olujolise ekuncedeni umsebenzisi kwimisebenzi yokuvelisa umxholo ...
I-Linux Mint 18.2 izakufika nezinto ezintsha, njengepaneli entsha yeBluetooth kunye nenye isoftware ehlaziyiweyo
Inguqulelo elandelayo yolunye losasazo oludumileyo olusekwe ku-Ubuntu, iLinux Mint 18.2 iza kufika neendaba ezininzi ezinomdla.
Uyifumana njani iMenyu yeHlabathi ku-Ubuntu Mate enkosi kwiVala Panel AppMenu
Isifundo esincinci sendlela yokufaka iVala Panel AppMenu, isicelo esiya kusivumela ukuba sibe neemenyu ezingaphandle kwesicelo windows ...
I-AppCenter, i-OS yasekuqaleni iyazilungiselela ukuphucula ivenkile yayo yeapp
Abaphuhlisi bokuqala be-OS balungiselela ukongeza utshintsho kwivenkile yabo yosetyenziso, iAppCenter, yabaphuhlisi ukuze bafumane imali.
Inguqulelo entsha yeParole, isidlali semidiya iXfce kunye neXubuntu, ngoku iyafumaneka
Iparole ngumdlali wemultimedia osetyenziswa yiXfce desktop kunye noXubuntu. Ihlaziyiwe kutshanje emva konyaka wophuhliso ...
ILubuntu 17.04 iphulukana nohlobo lwayo lwe-32-bit PowerPC
ILubuntu izakuthatha umhlala-phantsi kwimifanekiso ye-32-bit PowerPC kwiiseva zayo, kunye nokuyeka ukwakhiwa kwemihla ngemihla kweLubuntu 17.04.
Ngoku sinokonwabela iiphakheji ze-snap kwi-Ubuntu 14.04
Ubuntu 14.04 ngoku ungasebenzisa iiphakheji ze-snap enkosi kuhlaziyo kunye nofakelo lweenkqubo ezithile ezikwindawo yokugcina izinto ...
I-Linux Mint 18.1 KDE Edition, iXfce Edition kunye ne-LMDE Linux Mint kwiveki?
I-Linux Mint 18.1 Kde Edition kunye neXfce Edition ngoku ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe kwaye zifakelwe. Ukongeza kwi-LMDE 2, ukukhutshwa okukhutshelweyo kunokukhutshelwa kwakhona ...
Ubuntu 2 Alpha 17.04 ngoku iyafumaneka
Ngoku iyafumaneka ukuvavanya i-Alpha 2 ye-Ubuntu 17.04, uguqulelo olusibonisa iindaba eziza kwabiwa ngokusekwe kwi-Ubuntu 17.04.
Yenza lula uhlaziyo loBuntu ngeCare
Ukugcina inkqubo yakho yoBuntu ihlaziyiwe ngoku kulula ngenxa yezixhobo ezinje ngeCare, eya kuthi ikwenze ulibale malunga nokufumana.
UQuirky Xerus, ukuhanjiswa okusekwe kubuntu okungasasebenziyo
I-Quirky Xerus yindawo engasindi kwaye engasindi esebenzisa i-Ubuntu 16.04 njengesiseko sokwakha i-distro enokuqhuba kwi-pendrive ...
Ubuntu Budgie usungula ukhuphiswano lokunyusa imali ngaphambi kwenguqulo yakhe yokuqala njengevumba elisemthethweni
Njengoko ezinye iincasa zenzile kwezinye iinguqulelo, Ubuntu Budgie uqalile ukhuphiswano lokukhetha iimali eziya kufikelela kuhlobo lwazo lokugqibela.
Ubuntu Budgie ufuna ukuba sivote ekusebenziseni ilogo entsha okanye sigcine endala
Abaphuhlisi baka-Ubuntu Budgie basicela uncedo lokuthatha isigqibo kwi-logo entsha abayenzileyo okanye abayishiyileyo endala. Ukhetha ntoni?
I-ExLight ye-Exton sele ikhanyisile i-0.20 kunye neLinux Kernel 4.9
I-ExLight luhambiso olusekwe ku-Ubuntu lweenkqubo zezixhobo eziphantsi. Iphawuleka ngokwezifiso eziqinileyo ezifunyanwa nguRefracta ...
UHlelo lokuGqibela 5.0 ukuhanjiswa kwabadlali ngoku kuyafumaneka
Inguqulelo entsha ye-Ultimate Edition 5.0 Gamers ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa. Ngaphezulu kwemidlalo ye-50 kunye neemulators zibandakanyiwe kwindawo encinci yeXfce.
Ubuntu 17.04 yeqa iAlfa yokuqala yeencasa zayo ezisemthethweni
Ngokungafaniyo nento eyenziwa yiCanonical ngezinye iinguqulelo, Ubuntu 17.04 ayizukukhupha iAlfa yayo yokuqala yeencasa zayo ezisemthethweni zeholide.
UXubuntu sele enalo iBhunga njengoKubuntu no-Ubuntu
Okokugqibela, uXubuntu sele enalo iBhunga elisemthethweni eliza kulawula kwaye liphawule ikamva lonikezelo njengoko iBhunga laseKubuntu kunye noBuntu lisenza ...
Ubuntu Budgie 17.04 Yemihla ngemihla Yakha ukuza kungekudala
Kuyasokola, kodwa kuya kuza: Ubuntu Budgie 17.04 iya kuba yinguqulelo yokuqala yencasa entsha ye-Ubuntu kwaye kungekudala izakukhupha eyokuqala yokwakha imihla ngemihla.
I-Linux Mint 18.1 "Serena" Cinnamon kunye neMATE ngoku ziyafumaneka
Ngoku iyafumaneka kwiLinux Mint 18.1 "Serena" Cinnamon, eyona ndawo isetyenziswa ngokuzoba yenye yeenkqubo ezisebenzayo ezisekwe Ubuntu.
Ngoku iDock, idokodo elinomdla leKubuntu
Ngoku i-Dock yi-Kubuntu plasmoid esivumela ukuba sibene-dock ngaphandle kokufaka isicelo somntu wesithathu ukuze sikwazi ukwenza imisebenzi efanayo
Guadalinex Edu Okulandelayo, ulwabiwo lweLinux oluza kusetyenziswa ngabantwana bethu
IGuadalinex Edu Okulandelayo kukusasazwa okutsha kwemfundo okusungulwe yiJunta de Andalucía yezikolo kunye namaziko emfundo ....
I-Linux Mint ixhaswa liqela leKubuntu
UClem wenze esidlangalaleni intsebenziswano enayo neqela leKubuntu, intsebenziswano ekuvumela ukuba ufumane uLinux Mint KDE Edition kwaye unePlasma ...
Ubuntu Budgie Minimal, inguqulelo entsha ngaphakathi kwencasa ye-Ubuntu Budgie esemthethweni
Ubuntu Budgie Minimal yinguqu eya kuhamba no-Ubuntu Budgie, incasa entsha esemthethweni Ubuntu. Le nguqulo iya kuba ziinkqubo ezilula zomsebenzisi
Ungazilungisa njani iingxaki zegundane kwi KDE yeewbies
Isifundo esincinci sendlela yokutshintsha useto lwempuku kuKubuntu kwaye ucofe kabini emva kwinkqubo yethu yokusebenza ...
I-Trisquel 8 iFlidas sele ine-Alpha yayo yokuqala
I-alpha yokuqala yeTrisquel 8 Flidas ngoku iyafumaneka, ulwabiwo olusekwe kubuntu kwaye lubonakala ngokuba simahla ...
Uyifumana njani uGoogle Dr kwiKubuntu yethu
IGoogle Drayivu yinkonzo esetyenziswa ngokubanzi kodwa ayinasicelo sendalo soBuntu. Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayifumana njani kwi-Kubuntu yethu ...
Ubuntu ikhupha amaxwebhu ukwenza inguqulelo yethu yesiqhelo ye-Ubuntu Core
Ubuntu ikhuphe isikhokelo ngamaxwebhu ukuze umsebenzisi akwazi ukwenza uguqulo lwazo lwe-Ubuntu Core kwibhodi ye-SBC ...
Izikolo iLinux zihlaziywa kuhlobo lwe-5.0
Ukuhanjiswa kwe-Escuelas Linux kuhlaziywa kuhlobo lwe-5.0 kunye nokuphuculwa kwendalo esingqongileyo kunye nohlaziyo olukhulu lwezicelo zayo.
I-Linux Mint 18.1 "Serena" ilungele ukukhutshwa
Inguqulelo elandelayo yeLinux Mint 18.1 Serena ilungile, ezinye iibugs zokugqibela ziyalungiswa ngaphambi kokumiselwa kwenguqulo ye-beta.
I-Black Lab Linux 8.0 "i-Onyx" ngoku isemthethweni
IBlack Lab Linux 8.0 ikhutshwa ngokusemthethweni. Okwangoku yinguqu ehlawulelweyo ekhoyo, esekwe kwi-Ubuntu 16.04 LTS kunye nohlobo olulandelayo 9.0.
IMunich inokushiya Ubuntu kwaye ibuyele kwiWindows nakwiSoftware yabucala
IMunich kunye neBhunga lesiXeko sayo banokushiya Ubuntu kunye neSoftware yasimahla ukuba bayayithobela ingxelo yakutshanje ngabacebisi abaziwayo abakhetha Windows 10
Ubuntu Budgie, incasa entsha yobuntu esemthethweni
Kusemthethweni ngoku. Ubuntu Budgie sisongo esitsha sobuntu esisesikweni. Ukusasazwa okuya kuba neBudgie Desktop njengeyona desktop ephambili kwi-Ubuntu ...
Ungazongeza njani izinto zokugcina kwindawo yokuqala ye-OS Loki ukusuka kwisiphelo sendlela
Ukuba usebenzisa i-OS Loki yamabanga aphantsi usenokuba uqaphele ukuba indawo yokugcina izinto ayinakongezwa kwisiphelo sendlela. Apha sikufundisa ukuba ungayenza njani.
I-Mythbuntu ayisekho incasa esemthethweni kwaye ukukhula kwayo kuyekisiwe
I-Mythbuntu, incasa eyaziwayo ye-Ubuntu ene-MythTV iyayeka ukukhula, izishiye ngokwayo njengoko umphathi weprojekthi esitsho ...
UXubuntu utshintsha inkqubo yokuhambisa umkhondo
I-Xubuntu, incasa eyaziwayo ye-Ubuntu itshintshe inkqubo yokulandela umkhondo ukuze isetyenziswe kuphuhliso lwayo, yahlukile ku-Ubuntu ...
I-Linux Lite 3.2 iza nezixhasi ezikhulu zokhuseleko
I-Linux Lite 3.2 ikhutshwe ngokusesikweni kwaye iza nezixhobo ezibalulekileyo zokhuseleko kunye neepakeji zesoftware ezihlaziyiweyo kwiinguqulelo zamva nje.
Ubuntu boSathana boSathana, ingxelo eyoyikisayo yoBuntu
Ubuntu Satanic Edition lulwabiwo olwalusekwe ku-Ubuntu kwaye lujolise kunqulo lweedemon, into eyoyikisayo efanele ukuzama ngeHalloween
IBodhi Linux 4 ngoku ilungele ukukhutshelwa
IBodhi Linux 4 ngoku iyafumaneka. Usasazo oludumileyo olusekwe ku-Ubuntu ngoku luyafumaneka ngezinto ezintsha kwidesktop yakho yeMoksha kunye neZiko leApp ...
I-Linux Mint 18.1 iya kubizwa ngokuba yi-Serena
Ukuphuhliswa kwenguqulelo entsha yeLinux Mint sele iqalile. Ke iLinux Mint 18.1 entsha iya kubizwa ngokuba yiSerena, igama lomfazi njengeenguqulelo zangaphambili.
Yazi isantya sakho sokukhuphela kwiLinux Mint Cinnamon
Sinika iapplet encinci yeLinux Mint Cinnamon eya kukuvumela ukuba ulawule ukhuphelo kunye nokukhuphela isantya sonxibelelwano lwakho.
Inguqulelo entsha ye-ExLight esekwe kwi-Ubuntu 16.10
Ukuhanjiswa kwe-ExLight Live kuhlaziywa ngokusekwe kubuntu obutsha be-Ubuntu 16.10 kunye ne-Debian 8.6, kubandakanya izinto ezintsha.
Ukukhululwa kukaLubuntu 16.10 kunye nokutshintshela kwi-LXQt
ILubuntu 16.10 ibhengezwe njengophononongo lweLubuntu 16.04 yangoku kunye nokufudukela kwayo kwi-desktop kwi-LXQt, endaweni ye-LXDE yangoku.